PSJTV | आनीको अपारदर्शी धन्दा, कहाँबाट भित्र्याइन् ३८ करोड ?
स्रोत नखुलेको रकम पटक पटक नेपाल भित्र्याएपछि गायिका आनी छोइङ डोल्माको खाता रोक्का गरी सम्पत्ति सुद्धिकरणको आशंकामा अनुसन्धान सुरु भएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले रोक्का रकम खुला गरिदिन चर्को दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन्।
आनीको बैँक खातामा तीनपटक आएको रकम मात्रै रोक्का भएको हो। रोक्का नभएको २० करोड रकम भने उनले प्रयोग गरिसकेकी छन्। पहिल्यै भित्र्याइसकेको रकममाथि समेत अनुसन्धान हुने राष्ट्र बैँक तथा विभाग स्रोतले जनाएको छ।
त्रिशूली बस दुर्घटना : मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो
सम्झनुहोस् त, विवाहका सुरुवाती दिनहरुमा तपाईंको यौन जीवन कति रोमाञ्चक थियो ? तपाईंहरुको यौन जीवन सक्रिय र नियमित थियो । त्यस बखत तपाईंहरुले यौनको भरपुर आनन्द लिनुभयो । तर, जति–जति दाम्पत्य जीवन ...